“မွတ်စ်လင်မ်တွေ ဘယ်တုန်းကမျှ ဘယ်လူမျိုးကိုမျှ မမြိုခဲ့ဘူးပါ” | Danya Wadi
»အစ္စလာမ်ဘာသာ»“မွတ်စ်လင်မ်တွေ ဘယ်တုန်းကမျှ ဘယ်လူမျိုးကိုမျှ မမြိုခဲ့ဘူးပါ”
“မွတ်စ်လင်မ်တွေ ဘယ်တုန်းကမျှ ဘယ်လူမျိုးကိုမျှ မမြိုခဲ့ဘူးပါ”
Posted by danyawadi on December 12, 2016 in အစ္စလာမ်ဘာသာ, ဆောင်းပါးများ
အစ္စလာမ်​ဘာသာထဲသို့ အတင်းအဓမ္မ ဇွတ်​ မသွင်းရလင့်​ကို့​လေ့လာကြည့်​ပါ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ၈၈% ရှိပါတယ်။ မွတ်စလင်မ်တွေ အရေအတွက် ၅% ရှိတယ်ပဲထားပါ။ ဘယ်လိုအချိုးချတဲ့ သင်္ချာ ပုံသေနည်း နှင့်ပဲတွက်ပါ ဘယ်နည်းနှင့်မျှ မြန်မာပြည်တွင်း နေထိုင်သူ လူဦးရေ ကွာခြားချက်အရ အစ္စလာမ်နိုင်ငံဖြစ်လာ စရာမရှိပါ။
အာရေဗီးယားကျွန်းဆွယ်တစ်ခုလုံးကို နှစ်ပေါင်း ၁၄၀၀ အတွင်း အကြာဆုံး အုပ်ချုပ်ခဲ့တာ မွတ်စလင်မ်တွေပါ။ ဒီနေ့ အာရပ် တစ်ခွင်မှာ မိရိုးဖလာ ခရစ်ယာန်ကိုးကွယ်သူ Coptic Christian အရေအတွက် ၁၄သန်းကျော် ရှိတယ်။ တကယ်လို့ အခုဝါဒဖြန့် နေသလို မွတ်စလင်မ်တွေဟာ အင်အားကြီးမားလာရင် စစ်ပွဲတွေ ဖန်တီးပြီး အစ္စလာမ်ဘာသာထဲ အတင်း အဓမ္မ သွတ်သွင်း တယ်ဆိုရင် ဒီ Coptic Christian တွေ ဒီနေ့ ရှိတော့မည်ပင် မဟုတ်ပါ။
အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုကြည့်ပါ။ မွတ်စလင်မ်တွေ နှစ်ပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော် အုပ်ချုပ်ခဲ့ပေမဲ့ ဟိန္ဒူ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဒီနေ့ထိ စုစုပေါင်းလူဦးရေရဲ့ ၈၀%အတိုင်းအတာဖြင့် လူများစု အဖြင့်ရှိနေဆဲပါ။ တကယ်လို့ မွတ်စလင်မ်တွေ အင်အားရှိလာရင် လူတွေကို အစ္စလာမ်ဘာသာထဲ အတင်းဝင်ခိုင်း မဝင်ရင် သတ်ပစ်တာတို့ လုပ်ရိုးမှန်လျင် ဒီနေ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ မွတ်စလင်မ်တွေဟာ ၈၀%ကျန်သင့်တာပါ။ သို့သော် အဖြစ်မှန်ဟာ လက်ရှိဝါဒဖြန့်နေတာတွေရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်တွေသာ ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရမှာပါ။
စပိန်နိုင်ငံကိုကြည့်ပါ။ မွတ်စလင်မ်တွေ နှစ်ပေါင်း ၈၀၀ နီးပါး အုပ်ချုပ်ခဲ့ပါတယ်။ မည်သည့် ဘာသာခြားတစ်ဦးကိုမျှ အင်အား သုံးပြီး အစ္စလာမ်ဘာသာကို လက်မခံခိုင်းခဲ့ပါ။ ဒါပေမဲ့ Crusaders တွေဟာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် တစ်ဦးမကျန်အောင် သုတ်သင်ရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့ စပိန်မှာ မည်သည့်မွတ်စလင်မ် တစ်ဦးမျှ ဝတ်ပြုရန် ဖိတ်ခေါ်ခွင့်ပင်မပေးပါ။
အရှေ့ အာဖရိက၊ မလေးရှား နှင့် ကမ္ဘာ့မွတ်စလင်မ် အများဆုံး နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံ များကိုကြည့်ပါ။ သမိုင်းတစ် လျှောက် ဘယ်မွတ်စလင်မ် စစ်တပ်မှ အဲဒီနိုင်ငံတွေကို မရောက် ရှိခဲ့ပါ။ အဲဒီဒေသက လူမျိုးစုတွေကို အစ္စလာမ်ဘာသာကို လက်ခံရန် မည်သူမျှ အင်အားမသုံးခဲ့ပါ။
အစ္စလာမ်ဘာသာမှာ အင်အားသုံးပြီး သာသနာထဲ ဇွတ်ဝင်ခိုင်းဖို့ ဘယ်လိုမျှမဖြစ်နိုင်တဲ့ အခြေခံအချက်ဟာ ကုရ်အာန်ကျမ်းတော် မြတ်ထဲမှာ ပါရှိတဲ့ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ရဲ့ အောက်ပါ အမိန့်အရ သာပိုပြီး ထင်ရှားစေပါတယ်။
“—မည်သူတစ်ဦး တစ်ယောက်ကိုမျှ အစ္စလာမ်သာသနာတော် တွင်း၌ ဝင်ရောက်ရန်အတွက် အတင်းအဓမ္မ အနိုင်အထက် အလျင်းမပြုရ။ —”
ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ် ကဏ္ဌတော် ၂၊ စာပိုဒ်အမှတ် ၂၅၆။
အစ္စလာမ်ဘာသာဟာ လူတို့ရဲ့ ထံပါး ဓါးမိုး၍ ပြန့်ခဲ့တယ်ဆိုတာ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီဓါးဟာ သံနှင့်ပြုလုပ်ထားတာ မဟုတ်ပဲ မှန်ကန်မှု၊ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှု စတဲ့ Intellect ဆိုတဲ့ ဥာဏ်ပညာရဲ့ ဓါးပဲဖြစ်ပါတယ်။ အစ္စလာမ်ဘာသာရဲ့ သင်ကြားမှု တွေဟာ လူတွေရဲ့ အသိဥာဏ်တဲ့ လျော်ညီတဲ့ နှလုံးသားက လက်ခံနိုင်တဲ့ သဘာဝကို မဆန့်ကျင်ပဲ သဘာဝကို အသုံးချပြီး လောကီ လောကုတ္တရာ နှစ်ဋ္ဌာနရဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းမှုကို ဆောင်ကျဉ်းပေးနိုင်တဲ့ အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒါကြောင့်လည်း အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ဟာ ကုရ်အာန် ကျမ်းတော်မြတ် မှာ အခုလို အမိန့်ပေးထားပါတယ်။
“——အသင်သည် လူတို့အား ဥာဏ်ပညာဖြင့်လည်ကောင်း၊ ကောင်းမြတ်သော ဆုံးမသြဝါဒဖြင့် လည်းကောင်း အလ္လာဟ် အရှင်မြတ် ဘက်တော်သို့ ဖိတ်ခေါ်ပါလေ။ ထိုမှတပါး အသင်သည် ၎င်းတို့အား အကောင်းဆုံးနည်းဖြင့် အချေအတင်ပြောဆိုပါလေ—-”
ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ် ကဏ္ဌတော် ၁၆၊ စာပိုဒ်အမှတ် ၁၂၅။
၁၉၈၆ ခုနှစ် Reader’s Digest ‘Almanac’ မှာ ဆောင်းပါး တစ်ခုမှာ ကမ္ဘာ့ဘာသာကြီးများရဲ့ တိုးတက်မှု စာရင်းဇယားကို ၁၉၃၄ ခုနှစ်မှ ၁၉၈၄ ခုနှစ် အထိ နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကာလ အပိုင်းအခြား တစ်ခု နှင့် ပတ်သက်ပြီး ရေးသားထားပါတယ်။ အဲဒီ ဆောင်းပါးကိုပဲ ‘The Plain Truth’ မဂ္ဂဇင်းမှာထပ်မံ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီဆောင်းပါးမှာ အစ္စလာမ်ဘာသာဟာ ၂၃၅% တိုးတက်ခဲ့တဲ့ အတွက် နံပါတ် ၁ နေရာ ရခဲ့ပြီး ခရစ်ယာန်ဘာသာဟာ ၄၇% တိုးတက်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီ နှစ်၅၀ အတွင်း ဘယ်မွတ်စလင်မ်စစ်တပ်မှ စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပြီး သူတပါးနိုင်ငံကို အင်အားသုံးပြီး မွတ်စလင်မ်ထဲ မဝင်ခိုင်းခဲ့ပါ။ သန်းပေါင်းများစွာသောသူများဟာ နှစ် ၅၀ အတွင်း အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တွေ ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီနေ့ အမျိုးမျိုးသော လိမ်လည်ဝါဒဖြန့်နေတဲ့ကြားက အမေရိကန် နိုင်ငံ နှင့် ဥရောပမှာ အစ္စလာမ်ဘာသာဟာ လက်ခံကိုးကွယ် ယုံကြည်လာသူ အများဆုံးစာရင်းထဲမှာ ထိပ်ဆုံးမှာပါ။ အဲဒီနိုင်ငံတွေမှာ ဒီလောက် အစ္စလာမ်ဆန့်ကျင်ရေး ပိုစတာတွေ တပ်ပြီး တိုက်ခိုက်နေတာတောင် သိန်း သန်းချီပြီး အစ္စလာမ်ဘာသာ ကိုလက်ခံလာသူတွေတိုးလာနေတာ ဘယ်ဓါးနဲ့ ခြိမ်းခြောက်နေ လို့လည်း စဉ်းစားကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။
မလေးရှားနိုင်ငံမှာ မွတ်စလင်မ်တွေရဲ့ အရေအတွက်ဟာ စုစုပေါင်းလူဦးရေရဲ့ ၅၅%သာရှိပါတယ်။ ကျန်တာ တရုတ် ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ တရုတ်ခရစ်ယာန်၊ တမီလ်ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ တမီလ် ခရစ်ယာန် စသဖြင့် လူတွေ နှစ်သက်ရာကို လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့်ပေးထားသလို ဘယ်ဘာသာကိုမျှ ဘာမီဒီယာကိုမျှ သုံးစွဲပြီးစော်ကားခွင့်မရှိပါဘူး။ မည်သည့်ဘာသာဝင်ကမျှ အမျိုးပျောက်မှာလည်း စိုးကြောက်မနေသလို လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး လိုရုံးမှာတောင် “မြေမြို၍ လူမျိုးမပျောက်၊ လူမြိုမှ လူမျိုးပျောက် မည်” ဆိုတဲ့စာတမ်း အစား “ယဉ်ကျေးပါ၊ တာဝန်ကျေပါ၊ ပြုံးရွှင်စွာ အကူအညီပေးပါ” စတဲ့ စာတမ်းများနှင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော လူယဉ်ကျေးများရဲ့ ဆက်ဆံရေးကို မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
နိဂုံးချုပ်အနေနှင့် Dr. Joseph Adam Pearson ဆိုတဲ့ ပညာရှင် ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြောခဲ့တဲ့ စာပိုဒ်လေး တစ်ခု တင်ပြချင်ပါတယ်။
“ဒီနေ့ လူတွေဟာ အာရပ်တွေလက်ထဲ တစ်နေ့ကျရင် နျူကလီယား ဗုန်းရောက်သွားမှာကို စိုးရိမ်နေကြတယ်။ အမှန်တော့ အဲဒီ လူတွေ ဟာ အဖြစ်မှန်ကို ယနေ့တိုင် မရိပ်စားမိတာပါ။ အစ္စလာမ်ဆိုတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဗုန်းဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ တမန်တော်မြတ် မုဟမ္မဒ် (peace be upon him) မွေးဖွားလာတဲ့နေ့ မှစပြီး ကျရောက်ပြီးဖြစ်တယ် ဆိုတာပါ။”
လက်တွေ့အဖြစ်အပျက်ကလေး တစ်ခုမှာ လူငယ်တစ်ဦး နိုင်ငံရပ်ခြားမှာရှိနေစဉ် လူမျိုးရေးမုန်းတီးမှု ဖြစ်လာအောင် Youtube ကနေ စော်ကားထားတာကို မလေးရှားနိုင်ငံအတွင်း ရောက်တာနှင့် လေဆိပ်မှာတင် တရားဝင် ဝန်ချတောင်းပန် စေခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုအရေးယူမှုမျိုးတွေ အမှန်တကယ်လုပ်လာမယ်ဆိုရင် ယုတ်မာလှတဲ့ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ နေ အမုန်းဝါဒီများရဲ့ တစ်နပ်စား အကြံများကို ထိန်းချုပ်နိုင်မှာဖြစ်သလို ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများနည်းတူ တိုးတက်တဲ့လူ့ဘောင်သစ်ဆီသို့ လျှောက်လှမ်းနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းပါ ခင်ဗျား။
Ref: Was Islam Spread by the sword? ; History of Islam ; Heroes and Hero worship.
မောင်သွေးချွန်ဆိုတဲ့ အစွန်းရောက် ရေးသားတဲ့ စာအုပ်ကို ၀ီရသူက မဘသ အဖွဲ့ကနေ ဖြန့်ချီရောင်းချပေးနေတယ်လို့ သိရလို့ ကျွန်တော် လွန်ခဲ့တဲ့ ၃နှစ်အရင်က ရေးခဲ့တာလေး ပြန် share တာပါ။
အစ္စလာမ်ဘာသာကို မသမာသူတွေက မမှန်မကန် စွတ်စွဲချက်တွေနဲ့ ဘယ်လိုပဲ တိုက်ခိုက်ပါစေ လူမျိုးစုံ ဘာသာစုံက သမိုင်းပညာရှင် တွေရဲ့ထံမှာ တမန်တော်မြတ် မိုဟမ္မဒ် (صلی اللہ علیہ وسلم) ထက် သာပိုပြီး လေးစားအတုယူစရာ ခေါင်းဆောင် နောက်ထပ် တစ်ဦး ကမ္ဘာပေါ်မှာ နောက်ထပ် မရှိခဲ့သလို နောက်လည်း ရှိမလာနိုင်ဘူး။ အစ္စလာမ်ဘာသာဟာလည်း ကိုယ်တော်မြတ် (صلی اللہ علیہ وسلم) သင်ကြား ဖြန့်ဖြူးပေးခဲ့တဲ့ သာသနာဖြစ်လို့ မမှန်မကန် စွတ်စွဲပြောဆိုနေသူတွေသာ တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက် အမှန်ကိုလက်ခံလာနေကြသလို အဆိုးမြင်သမားတွေသာ လောက ကနေ ထွက်ခွာသွားနေကြတာသာရှိပေမဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဟာ ကမ္ဘာ့လူဦးရေ လေးပုံ တစ်ပုံရဲ့ နှလုံးသားထဲမှာ ကိန်းအောင်းနေတယ် ဆိုတာပါပဲ။
← NVC နဲ့ ပုဒ်မ-၆၅ ဆက်စပ် လာရင် နိုင်ငံသား ဖြစ်ဖို့ အခွင့် အလမ်း နည်းသွား လိမ့်မယ် (တရားလွှတ်တော် ရှေ့နေ ဦးခင်မောင်ချို)
“တမန်တော်နေ့ အသံလွှင့်မိန့်ခွန်း” →